Ishishini leSelfowuni Ukufudumeza | Martech Zone
NgoMgqibelo, Julayi 11, 2009 NgeCawa, ngoSeptemba 29, 2013 Douglas Karr
Umzi mveliso oshukumayo uyashushubeza-kwaye intengiso yeselfowuni ngokuqinisekileyo iya kulandela. Mhlawumbi olona phuculo lubalaseleyo kukukwazi ukuqhuba ii -apps zomntu wesithathu.
Ingeniso yokuthengisa ngeselula kulindeleke ukuba inyuke iye ngaphezulu kwe-24 yezigidigidi zeedola kwihlabathi liphela ngo-2013, iqhotyoshelwe ngezicwangciso zedatha ethe tyaba kunye nophando oluxhaswa ziintengiso, ividiyo kunye nemidlalo yeenkonzo zomdlalo ngokwesimo sezulu esitsha esikhutshwe yinkampani yohlalutyo lwemarike. Umthombo: Umsindo ongenantambo ku ABI yophando.
Ikhokelwe yi-iPhone ye-Apple ngaphezulu Ukhuphelo lwe-1 yezigidigidi zeapps kwiinyanga ezili-9I-Blackberry, iVerizon, iMicrosoft kunye ne-Android ziqinisekile ukuba ziya kulandela. Izindululo eziphezulu, ukusetyenziswa okukhulu kunye nolawulo olupheleleyo lwebhodi yezitshixo kwiifowuni ezintsha ziyavula ishishini, kunye nesantya sokuqhubekeka kunye nememori. Nditsho nabadlali abadala kwintengiso bazalwa ngokutsha… khangela iNokia N97. (Thanda intengiso yentsholongwane kunye no-LL Cool J, naye)
Ukuba awuyiboni ividiyo, cofa kwisithuba, Umzi mveliso oshushu ukufudumeza. Andihambisani nefowuni njengoko kufanelekileyo… kanye kanye waphumelela kwiBlackberry. Umhlobo kunye UkuThengiswa kweSelula guru, uAdam Omncinci, uza kubhala ezinye izithuba kungekudala Martech Zone kwaye ndikhangele phambili kuyo!
tags: ishishini mobileurhwebo mobile
Jul 14, 2009 ngo-2: 43 AM
Isithuba esihle kakhulu kwishishini leeMobile! Ndijonge phambili ekunikeleni.